अब श्वास परीक्षण गरेर एक मिनेटमै कोरोना पत्ता लाग्ने (भिडियाे) - Mitho Khabar
सिंगापुर । अब काेराेना (कोभिड–१९) संक्रमण एक मिनेटमै पत्ता लाग्ने भएको छ । सिंगापुरको ब्रेथोनिक्स कम्पनी मार्फत् दुई विद्यार्थीले ६० सेकेन्डको श्वास परीक्षण गरी कोभिड–१९ पत्ता लगाउने उपकरणको विकास गरेका हुन् ।
उपकरणको विकास नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर (एनयूएस)का दुई विद्यार्थी डा. जिया युनान र दु फाङले गर्नुभएको हो । त्यस्तै विश्वविद्यालयको ग्रेजुएट रिसर्च इनोभेसन प्रोग्रामले उपकरण विकासमा सहयोग गरेको हो ।
यस उपकरणलाई प्रविधि विकासमा ‘गेम चेन्जर’को रूपमा लिइएको छ । यो ९० प्रतिशतभन्दा बढी भरपर्दो रहेको बताइएको छ । यस्तै यो नै एसियामा सबभन्दा बढी सुनिश्चित र भरपर्दो कोरोना परीक्षण गर्ने पहिलो उपकरण भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ ।
यो उपकरण प्रयोग गर्न कुनै विशेष तालिम लिन नपर्ने बताइएको छ । ‘हाम्रो श्वास परीक्षण उपकरण चलाउन सजिलो छ’ डा. जियाले भन्नुभयो, ‘यसमा कुनै विशेष तालिम प्राप्त कर्मचारी वा ल्याब प्रक्रिया चाहिँदैन ।’
यो उपकरणले धेरै मानिस रहने स्थानमा तीव्र परीक्षण गरी कोरोना फैलिनबाट रोक्न प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ ।